Indlela yokuthi 'ku' ngesiJamani kunye ne 'Nach' kunye ne 'Zu'
Kukho ubuncinane ubuncwane besineendlela zokuthi "ukuya" kwisiJamani . Kodwa enye yemithombo enkulu "yokudideka" ivela kwizinto ezimbini ezilandelayo: nach kunye zu .
Ngethamsanqa, kukho ukuhlula okucacileyo phakathi kwezi zibini.
I-preposition ye- nach , ngaphandle kwegama elithi idiomatic elithi "nach Hause" ([ekhaya], eliya ekhaya), lisetyenziselwa kuphela amagama eendawo zendawo kunye neengcambu zekhampasi (kubandakanye ngakwesobunxele nakwesokudla).
Ininzi eminye isebenzi ye- nach inentsingiselo yayo "emva kwe" ( nach der Schule = emva kwesikolo) okanye "ngokutsho" ( ihm nach = ngokutsho kwakhe).
Nazi izibonelo ze- nach xa uthetha "ukuya": nach Berlin (eBerlin), nech rechts (ngakwesokudla), nach Österreich (ukuya e-Austria). Qaphela, nangona kunjalo, ukuba amazwe amaninzi okanye amabhinqa, afana neS die Schweiz , ngokuqhelekileyo asetyenziswa endaweni ye- nach : e-die Schweiz , eSwitzerland .
I-preposition zu isetyenziselwa kwezinye iimeko kwaye isoloko isetyenziselwa "ukuya" nabantu: Geh zu Mutti! , "Yiya kum (wakho) umama!" (Kodwa kancinci i-Mutti , ileta eya kumama.) Qaphela ukuba i- zu inokuthi "nanjalo," isebenza njengesibhengezo: " thumela kakhulu."
Omnye umahluko phakathi kwezi zimbini kukuba i- nach ayinakudla ngokusetyenziswa kunye ne-athikili, ngelixa i- zu ihlala idibaniswe kunye neqendu okanye idibene negama elilodwa, njenge- zur Kirche ( zu der Kirche , kwibandla) okanye i- zum Bahnhof ( zu dem dem Bahnhof , kwisikhululo sesitimela).
I-nach Hause no zu Hause
Zomibini zezi zihlandlo zisetyenziselwa iHaus (e) , kodwa i- nach kuphela ithetha "ukuya" xa isetyenziswe neHaus . Ibinzana zu Hause lithetha "ekhaya," nje nge zu zu Rom lithetha "e / eRoma" kweso sikhombiso, uhlobo olwakhiwa ngumdala. (Qaphela ukuba ukuba ufuna ukuthetha "endlwini yam / indawo" ngesiJalimane, uthi zu zu mir (zu + isichazi samagama) kwaye igama elithi Haus alisetyenziswanga konke!) Amagama athi "i-nach Hause" kunye "zu Isizathu "landela imigaqo ye- nach kunye nomnikezelo owenziwe ngasentla.
Nazi ezinye izibonelo zokusetyenziswa kwe- nach kunye ne- zu (njenge "ukuya"):
Sindiza kuFrankfurt. (indawo)
Umoya uvunguza ukusuka entshona ukuya empuma. (icompass)
Ndingayifumana njani kwisixeko? (engekho yendawo)
Ndiya eFransi. (indawo)
Ngaba uya ecaweni? (engekho yendawo)
Kutheni nina madoda ningena endaweni yethu [kuthi]. (engekho yendawo)
Siya kubhakabhaka. (engekho yendawo)
Isikhokelo / Indawo
I-preposition zu ichaza imbono yokuhamba kwisikhokelo ukuya kwindawo eya kuyo. Kuphikisana no- von (ukusuka): von Haus zu Haus (kwindlu ngendlu). Nangona zombini izivakalisi ezilandelayo zingaguqulelwa ngokuthi "Uya eyunivesithi," kukho ukumahluko kwiintetho zesiJamani:
Er geht zur Universität . (IYunivesithi yindawo ekhoyo kuyo.)
I-Er geht i-Universität ifa . (Ungumfundi. Uya eyunivesithi.)
Ezi ngcebiso ezikhohlisayo
Iziphakamiso kunoma yiluphi ulwimi zingaba lukhuni ukujongana nazo. Bakhululeka kakhulu ekuphazamiseni ulwimi. Kungenxa yokuba ibinzana litsho ngandlela-thile ngesiNgesi, akuthethi ukuba kuya kuba njalo kwiJamani.
Njengoko sibonile, i- zu kunye ne- nach zingasetyenziswa ngeendlela ezininzi, kwaye "ukuya" ngesiJamani akusoloko ichazwe ngala magama amabini. Khangela ezi "imizekelo" ngesiNgesi nangesiJamani :
ezilishumi ukuya kwezine (amanqaku) = zehn zu vier
elishumi ukuya kwezine (ixesha) = zehn vor vier
Andifuni = ich will nicht
ukuba ndivuyiswe = zu meiner Freude
nolwazi lwam = iWissens
i-bumper ukuya bumper = Stoßstange i-Stoßstange
edolophini = ekufeni eStadt
kwiofisi = ins Büro
kumlinganiselo omkhulu = kwiHohem Grad / Maße
Nangona kunjalo, ukuba ulandela imithetho elula kweli phepha le- nach kunye no- zu , unokuphepha ukuzenza iimpazamo ezicacileyo kunye nezo zibini ezimbini xa ufuna ukuthetha "ukuya."
Iziphakamiso zesiJamani ezinokuthi "
Zonke iziphakamiso ezilandelayo zithetha ezinye izinto ezininzi ngaphandle kwe "to":
i-auf, i-bis, i-nach, i-vor, zu; hin und ( isingeniso, ukuya phezulu)
Qaphela ukuba isiJamani sisasebenzisa izibizo okanye izimelabizo kwimeko yelungu lokubonisa "ukuya": imil (kum), Umtshintshi wokuhamba (kumama), ihm (kuye).
Ramasser - ukuCoca, Hlanganisa
I-Top 5 kufuneka ibone i-Broadway Musicals